ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် ဆူဇူကီဆွဇ့်များ | ဆူဇူကီးကယ်ရီကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Grey Suzuki Swift 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Black Suzuki Swift 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Red Suzuki Swift XS 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
Pearl White Suzuki Swift 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
ပြည်တွင်းမှာ ခေတ်စားတဲ့ ဟတ်ဘတ်ကား အမျိုးအစားကား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ စူပါ မီနီ ကား အမျိုးအစားထဲတွင် ပါဝင်ပြီး အရှေ့ အင်ဂျင်၊ ရှေ့ဘီးမောင်း၊ ကား အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံ လှပ၊ ဒီဇိုင်းဆန်း ဆန်းမူကြောင့် ယခင် တစ်နှစ် နှစ်နှစ်က ပြည်တွင်းမှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ အမျိုးအစား တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေး အထိုက်အလျောက် သက်သာမှု ကြာင့်လည်း လူကြိုက်များရခြင်း အကြောင်းအရာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိပြည်တွင်းတွင် ဒုတိယမျိုးဆက်နဲ့ တတိယ မျိုးဆက်တို့ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နစ်ဆန်း မတ်ခ်ျကားများ၊ မစ်ဆူဘီရှီ ကော့တို့နဲ့ ဆိုဒ် အရွယ်အစား တူညီပါတယ်။ ၁၃၀၀ စီစီ အင်ဂျင်ကို အသွင်းများပါတယ်။ ထုတ်တာကတော့ ၁၂၀၀ စီစီ ကနေ ၁၆၀၀ စီစီထိကို ထုတ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ၂၀၀၈ နဲ့ အထက် ၁၃၀၀ စီစီ အင်ဂျင်ကားလေးတွေကို သွင်းကြပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ထုတ်တွေကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တို ဂီယာ လေးချက် ကို အသုံးများပါတယ်။
ဆူဇူကီ ဆွဇ် ရဲ့ အကြောင်း တစ်ချို့
ဆွဇ်ကားတွေကို ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကနေ စပြီး ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ စစချင်းမှာတော့ တံခါး (၃) ပေါက်ကားတွေကို အရင် ထုတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တံခါး လေးပေါက် ကားတွေကို ထုတ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ပထမ မျိုးဆက်မှာ ၁၃၀၀ စီစီနဲ့ ၁၅၀၀ စီစီ တွေကို သာ ထုတ်ပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည် နဲ့ မော်ဒယ် အမျိုးအစားများ
ပြည်တွင်းမှာ ခေတ်စားတဲ့ အင်ဂျင်ကတော့ ၁၃၀၀ စီစီ ကားလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂၀၀ စီစီမော်ဒယ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ စူပါ မီနီကားတွေထဲမှာ တစ်ခုတည်းသော လေးဘီးမောင်း စနစ်ကို ရရှိနိုင်တဲ့ ဆူဇူကီး ဆွဇ်များဖြစ်ပြီး ၁၂၀၀ စီစီ အင်ဂျင်ဟာ မြင်းကောင်ရေ အား ၉၃ ရှိပြီး ၁၂ စက္ကန့်ကျော်ဖြင့် သုညမိုင်ကနေ ၆၂ မိုင်ကို မြင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအင်ဂျင်ဟာ ဆိုရင်တော့ ဓာတ်ဆီ (၁) ဂါလံကို ၅၆ မိုင်ကျော်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကား မော်ဒယ်များ အနေနဲ့ XG ဂရိတ်၊ RS ဂရိတ်၊ XL ဂရိတ် ကား အမျိုးအစားတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ XL ဂရိတ်ကတော့ အနည်းငယ် မော်ဒယ် မြင့်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဈေးကလည်း အနည်းငယ် မြောက်တက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကားစီယာတိုင်မှာ ခလုတ်တွေ ပါဝင်လာတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တီဗီ ကတော့ တော်တ်ာများများသောမော်ဒယ်တွေမှာ ပါရှိပါတယ်။ မပါရင် ဒီရောက်မှာ ပြန် လည်း တပ်ဆင်ခြင်းတွေလည်း ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
စူပါမီနီ ကားဝယ်ယူသူများကို စတိုင်ကျလှပမှုကို ပေးစွမ်းမဲ့ ဆူဇူကီး ဆွဇ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ပိုင်းမှာ ကြီးမားတဲ့ ကားခေါင်းနဲ့ ထင်ရှားစေပြီး နှင်းခွဲမီး၊ ရှေ့မီးလုံးကြီးတွေက နောက်ကို ချွန်ပြီး ရှည်သွားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ဖက်က ကွေးကောက်တဲ့ ကားနောက်ပိုင်းက စပေါ့စ်ကားတွေရဲ့ ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ အလွိုင်းဝှီးတွေ ကို ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့ SZ2 မော်ဒယ်တွေမှာ မတွေ့ရပေမဲ့ ကျန်တဲ့ မော်ဒယ်တွေမှာတော့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ SZ4 မော်ဒယ်တွေမှာတော့ မှန် အမည်းနဲ့ပါရှိလာပါတယ်။ ဆူဇူကီး ဆွဇ်ရဲ့ အနောက်ခန်းကတော့ ဌင်းရဲ့ ပြိုင်ဖက်တွေလောက်တော့ မကျယ်ပါဘူး။ မော်ဒယ်တွေ အားလုံးမှာ ဒရိုင်ဘာခုံကို ချိန်ညှိမှုကို ကောင်းကောင်း ပေးထားပါတယ်။ ခလုတ်တွေ၊ တံခါး လက်ကိုင်တွေကို သုံးရတာက လွယ်ကူတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပြည်တွင်း က တစ်ပတ်ရစ်ကားများ
ပြည်တွင်းမှာတော့ ၁၃၀၀ စီစီ ဆွဇ်ကားလေးတွေကို တွေ့ရပြီး အရောင် တော်တော်များများ ရွေးချယ် ၀ယ်ယူစီးနင်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဖြူ၊ အမည်း၊ ငွေရောင်၊ အ၀ါ၊ အနီရောင်၊ အပြာရောင် စသည့်ဖြင့် ၀ယ်ယူ စီးနင်ကြပါတယ်။ အချို့ကားတွေမှာ ပါဝါလောခ့်၊ ရီမုတ် ကီး၊ တီဗီ၊ လေအိတ်၊ ပါဝါ ၀င်းဒိုးစတဲ့ စနစ်တွေကို ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဈေးနှုန်းက မော်ဒယ် တစ်နှစ်လောက် ကွာရင်ကို ငါးသိန်းလောက် ကွာပါတယ်။ ၂၀၀၈ မော်ဒယ်ဆို ကျပ်သိန်း ၁၀၀ လောက်ကနေ စပြီး ရှိပါတယ်။ ကျပ်သိန်း ၁၄၅ လောက်ကို ရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ တီဗီ၊ ပါ၊ ကရိယာစုံပါ ဆွဇ် တစ်စီးကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ၂၀၁၃ ကားတွေဆို ကျပ် သိန်း ၁၃၀ လောက်နဲ့ ရရှိနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။